uSuku lweNkululeko 2020 - Swikriti's Blog
USuku lweNkululeko yiholide likazwelonke laseNingizimu Afrika. Ephreli 27 kugujwa minyaka yonke. Lolu suku luhlonipha ukhetho lokuqala lwentando yeningi lwaseNingizimu Afrika. USuku lweNkululeko ingumkhosi wentando yeningi nentando yeningi yaseNingizimu Afrika. Ukhetho lokuqala lwentando yeningi lwaseNingizimu Afrika lwenziwa mhlaka 26-16 Ephreli 1994. Kwakuwukhetho lokuqala oluvumela abantu baseNingizimu Afrika bazo zonke izinhlanga ukuthi bavote. Kwakungokokuqala ukuba bonke abavotwayo babhekwe njengezakhamizi ezilinganayo emlandweni waseNingizimu Afrika. Kwakukhomba ukuphela kobandlululo eNingizimu Afrika kanye nokuqala kweminyaka entsha.
UNelson Mandela ubonakala njengobaba weSouth Africa yanamuhla ngenxa yeqhaza lakhe ekwakhekeni kwentando yeningi nasekupheleni kokubusa kwabamhlophe. Idemokhrasi emele ukhetho yazalwa okhethweni lokuqala lwentando yeningi ngo-Ephreli 27, 1994. Abantu abaningi baseNingizimu Afrika abangakaze bavote ngaphambi kokuthola inkululeko yabo futhi bashintsha izwe laba ngumphakathi ongabandlululi ngokobuhlanga nangokobandlululo.
Ukhetho lokuqala olungenabandlululo lwabanjwa ezingeni likazwelonke lapho bonke abavoti abangaphezu kweminyaka engu-18, kubandakanya nezakhamuzi zaseNingizimu Afrika ezingapheli. Esikhathini esedlule, ababengewona abamhlophe bebonke babeba namalungelo okuvota ngaphansi kohlelo lobandlululo, futhi abantu abamnyama baseNingizimu Afrika babengenamalungelo okuvota nhlobo.
Amaqembu ezepolitiki ayishumi nesishiyagalolunye abamba iqhaza futhi babalelwa ezigidini ezingama-20 abantu abavotela okhethweni lwango-1994. Ukhetho belungokwentando yeningi, futhi babebhekwa njengabakhululekile nabanobulungiswa ngababukeli bakwamanye amazwe. Ukhetho lwalunqotshwa yi-African National Congress. UNelson Mandela wakhethwa ngomhlaka 10 Meyi 1994 njengoMongameli wokuqala waseNingizimu Afrika okhethwe.
Ukubandlululwa ngokobuhlanga ‘okuhlelekile’ kwaqala eNingizimu Afrika ngonyaka we-1948 kodwa iNingizimu Afrika yathinteka ngenxa yobukoloni nokuxhashazwa iningi lase-Afrika kusukela ngonyaka ka-1652. Ukulungiswa kwezingxoxo phakathi kweLiberation Movement nohulumeni wobandlululo kwafinyelelwa ngemuva kweminyaka yokuphikiswa ngo-1988.
UMongameli uNelson Mandela wethule iPhalamende ngosuku lokugubha usuku lokuqala
Ngo-Ephreli 27, 1994 kuqale ukusebenza, bambalwa kithi abakwazi ukumisa ukuzamazama komhlaba, njengoba sakhunjuzwa ngezikhathi ezimbi emhlabeni, amathuba amahle esinawo manje nekusasa eliqhakazile esililindele. Futhi ngakho-ke sihlangana lapha namhlanje, nakwezinye izindawo emhlabeni, ukumaka usuku lomlando wesizwe sethu. Yonke indawo emhlabeni, abantu baseNingizimu Afrika bashaya izinhliziyo zethu, bavuselela ubuhlakani bethu nokuzibophezela kwethu ekusaseni lezwe lethu.
April 13, 2020 April 15, 2020 swikriti	558 ViewsEphreli 27th umcimbi womhlaba wonke, Imigubho yoSuku lweNkululeko 27th Ephreli, Inhloso yosuku lweNingizimu Afrika yenkululeko, inkulumo yenkululeko kaNelson mandela, umlando wosuku lwenkululeko, umongameli wokuqala waseNingizimu Afrika, Usuku lwenkululeko, usuku lwenkululeko 27 april, Usuku lwenkululeko eNingizimu Afrika, Usuku lwenkululeko lubalulekile eningizimu Afrika
← Tema del Día de la Tierra 2020
Funny Memes on Lockdown 2.0 →